GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Nehemaya mere ka ha kwụsị irigbu ibe ha (1-13)
Nehemaya eboghị ndị ya ibu arọ (14-19)
5 Ma, ndị obodo anyị na ndị nwunye ha besiwere ákwá ike n’ihi ihe ụmụnne ha ndị Juu na-eme ha.+ 2 Ụfọdụ nọ na-asị: “Anyị na ụmụ anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị dị ọtụtụ. Anyị ga-enwetarịrị ọka* anyị ga-eri ka anyị wee dịrị ndụ.” 3 Ndị ọzọ nọ na-asị: “Anyị na-enye ugbo anyị na ubi vaịn anyị na ụlọ anyị ka ha bụrụ ihe ibé ka anyị nwee ike inweta ọka* n’oge ụkọ nri.” 4 Ndị ọzọ nọkwa na-asị: “Anyị ejirila ugbo anyị na ubi vaịn anyị gbaziri ego anyị ji tụọ ụtụ eze.+ 5 Anyị na ụmụnne anyị bụ otu anụ ahụ́ na otu ọbara, ụmụ anyị dịkwa ka ụmụ ha. N’agbanyeghị ya, anyị na-eme ka ụmụ anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị bụrụ ndị ohu. Ụfọdụ ụmụ anyị ndị nwaanyị abụrụdịla ndị ohu.+ Ma, e nweghị ihe anyị ga-emeli n’ihi na ugbo anyị na ubi vaịn anyị bụzi nke ndị ọzọ.” 6 Mgbe m nụrụ ákwá a ha na-ebe na ihe ndị a ha kwuru, ezigbo iwe were m. 7 M wee chebara ihe ndị a echiche ma baara ndị a ma ama na ndị osote onye na-achị achị mba, sị ha: “Onye ọ bụla n’ime unu na-anara nwanne ya ọmụrụ nwa.”+ M kpọkọkwara ndị mmadụ ka e nwee nnukwu nzukọ n’ihi ha. 8 M wee sị ha: “Anyị ejisiela ike gbapụta ụmụnne anyị ndị Juu e resịrị ndị mba ọzọ. Ma ùnu ga-erezi ụmụnne unu?+ Ànyị ga-azụrụzi ha n’aka unu?” Ha amaghị ihe ha ga-ekwu, o nyeghịkwa ha ọnụ okwu. 9 M sịziri: “Ihe unu na-eme adịghị mma. Ọ̀ bụ na unu ekwesịghị ịtụ egwu Chineke* anyị,+ ka ndị mba ọzọ, bụ́ ndị iro anyị, ghara ịkọcha anyị? 10 Mụ na ụmụnne m na ndị na-ejere m ozi na-agbazinyekwa ha ego na ọka* n’anaghị ha ọmụrụ nwa. Biko, ka anyị kwụsịnụ ịnara ha ọmụrụ nwa ma anyị gbazinye ha ihe.+ 11 Biko, nyeghachinụ ha taa ugbo ha,+ ubi vaịn ha, ubi oliv ha, na ụlọ ha. Nyeghachikwanụ ha ọmụrụ nwa* unu naara ha maka ego, ọka,* mmanya ọhụrụ, na mmanụ unu gbazinyere ha.” 12 Ha wee sị: “Anyị ga-enyeghachi ha ihe a niile, anyị agaghịkwa ana ha ihe ọ bụla. Anyị ga-eme nnọọ ihe i kwuru.” M wee kpọọ ndị nchụàjà ma mee ka ụmụ nwoke ndị ahụ ṅụọ iyi na ha ga-emezu nkwa a ha kwere. 13 M fechakwara uwe m* wee sị: “Ka ezi Chineke si otú a fechapụ onye ọ bụla na-emezughị nkwa a n’ụlọ ya nakwa n’ihe o nwere. Ka e sikwa otú a fechapụ ya ma mee ka ọ gbara aka.” Ọgbakọ ahụ niile wee sị: “Amen!”* Ha wee too Jehova, mmadụ niile mezukwara nkwa ha kwere. 14 Malite n’ụbọchị eze mere m gọvanọ ha+ na Juda, malite n’afọ nke iri abụọ+ ruo n’afọ nke iri atọ na abụọ+ n’ọchịchị Eze Atazaksis,+ ya bụ, afọ iri na abụọ, mụ na ụmụnne m erighị nri e kwesịrị ịna-enye gọvanọ.+ 15 Ma ndị bụ́ gọvanọ tupu mụnwa boro ndị obodo anyị ibu arọ. Ha na-anara ha shekel* ọlaọcha iri anọ kwa ụbọchị maka nri na mmanya. Ndị na-ejere ha ozi megbukwara ndị obodo anyị. Ma emeghị m otú ahụ+ n’ihi na m na-atụ egwu Chineke.+ 16 M sokwa na-arụ mgbidi a, e nweghịkwa ala anyị nwetaara onwe anyị.+ Ndị niile na-ejere m ozi zukọtakwara n’ebe ahụ maka ọrụ ahụ. 17 Ndị Juu na ndị osote onye na-achị achị bụ́ ndị na-eri ihe na tebụl m dị otu narị na iri ise (150), ha na ndị ọzọ si mba ọzọ. 18 Kwa ụbọchị, a na-akwadebere m* otu oké ehi, atụrụ isii kacha mma, na nnụnụ. Otu ugboro n’ụbọchị iri, a na-ebutekwara m ụdị mmanya dị iche iche n’ụba. N’agbanyeghị ihe a niile, agwaghị m ndị obodo anyị ka ha nye m nri e kwesịrị ịna-enye gọvanọ n’ihi na ibu ha bu karịrị akarị. 19 Chineke m, biko, cheta m ma gọzie m n’ihi ihe niile m meere ndị a.+
^ Na Hibru, “ije ije n’egwu Chineke.”
^ Na Hibru, “otu ụzọ n’ụzọ otu narị,” ya bụ, ọmụrụ nwa ha na-akwụ kwa ọnwa.
^ Na Hibru, “M fechapụrụ obi m,” ya bụ, akpa na-adị n’ebe elu elu n’uwe ndị oge ochie.
^ Ma ọ bụ “a na-esi n’ego akpa m akwadebe.”